Feminist Books And Publications – Purple Feminist Group
HomeFeminist Books And Publications
As feminism becomesapopular or infamous topic in Myanmar, there isadire need for more feminist literature, artwork, and interpretations in the Burmese language. In the past few years, PFG has published two feminist translation books, Why We Should All Be Feminists and Dear Ijeawele, or A Feminist Manifesto in Manifesto in Fifteen Suggestions by Chimamanda Ngozi Adichie with authorization from the author from the author.
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ဖီးမီးနစ် ဘာကြောင့်ဖြစ်သင့်သလဲ
Chimamanda Ngozi Adichie’s “We Should All Be Feminists” comes toapowerful new statement about feminism today – written asaletter toafriend. In We Should All be Feminists eloquently argued andamuch-admired essay of 2014, she proposed that if we wantafairer world we need to raise our sons and daughters differently.
The translator of the book, Nandar who is the founder of Purple Feminists Group obtained the rights to publish and distribute the Burmese version of the book.
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး ဖီးမီးနစ် ဘာကြောင့် ဖြစ်သင့်သလဲ (We Should All Be Feminists) စာအုပ်ကို ရေးသူ ချိမာမာန်ဒါ နဂိုဇီ အဒီချီသည် သူမ ချစ် သူငယ်ချင်းကို ရေးသည့် စာအဖြစ် ထက်မြက်သော ဖီးမီးနစ်စာသားများကို ထုတ်လွှတ်လိုက်ပါပြီ။ မနန္ဒာ မြန်မာဘာသာပြန်ထားသည့် အက်ဒီချီ၏ We Should All Be Feministsတွင် ပိုမို မျှတပျော်ရွှင်တဲ့ ကမ္ဘာတည်ဆောက်ရန် သား နှင့် သမီးတို့အား ခုနှင့် မတူညီအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ရမယ့် အကြောင်းတွေကို ရေးသားထားပါတယ်။
ထိုသို့ အရေးပါသော ဖီးမီးနစ် စာပေကို ကျယ်ဝန်းစွာ ဖြန့်ကျက်ရောက်ရှိစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် The Vagina Monologues ပြဇာတ်ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူ နှင့် Purple Feminists Group အဖွဲ့ကို စတင်ခဲ့သူ မနန္ဒာမှ မြန်မာဘာသာပြန်ကာ မူရင်းစာရေးသူထံမှ ထုတ်ဝေခွင့်နှင့်အတူ ထုတ်ဝေခြင်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်လှစွာသော အီဂျီဝီလီ (သို့မဟုတ်) ဖီးမီးနစ် အကြံပြုချက်(၁၅) ချက်